November 27, 2020 Xuseen 3
Puntlandtimes (Galkacyo)-Magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaa ka taagan cabasho xoogan oo ka imaanaysa qaybaha kala duwan ee bulshada kunool magaaladaasi iyo xitaa inta badan gobolada ay maamusho xukuumadda Puntland.
Qayabah kala duwan ee bulshada iyo ganacsatada suuqyada magaalada Galkacyo ayaa waxa ay cabasho xoogan ka muujinayaan korukac xoogan oo ku yimid qiimaha lagu kala sarifto lacagaha qalaad iyo maciishadda noocyadeeda kala duwan.
Qaybo kamid ah xarumaha ganacsiga magaalada Galkacyo ayaa laga diidey qaadashada lacagta shilling Somaliga xilli halkii dollar lagu kala sarifanayo 50 kun oo shilling Somali ah suuqyada magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug.
Layaabka dunida!!!!! $100(50shillings)=5000000 shillings. Side ayaa shicibka Puntland u noolaan doonan, allow sahal amuuraha
War shacabka waa hore ayey qabyaaladi seexisay maantay bay soo baraarugeen,war Puntland waxaa ja hura nidaam ku dhisan boob hantida dadwaynaha reer Puntland,marka suuragal ma aha kuwii ka mas’uulka ahaa,musumaasuqa baahsan ee curyaamiyey wax walba in laga filo in ay wax hagaajiyaan.
Nidaamka maantay maantay Puntland ku socoto baa sabab u ah in inyar oo ganacsato ah iyo madaxda Maamul maamulka Puntland ay dadka maceeshadii iyo noloshiiba ay ku ciriiriyaan,suuragal ma aha in inta nidaamkii lago guuldaraystay lago socto in dhibaatada nolosha reer Puntland ay ku sugnaayeen mudada dheer laga baxo.
Nidaamkii lago shaqaynayey muddada 22 ka sanadood ah waa uu shaqayn waayey ee wado kale bal,hala raadiyo.
Kkkkkk adigaaba jaha wareersane sidee ayaad talo u keeni kadhaa?????????? Bal noo sheeg xalka aad wadid.